Sony nkewa mkpanaka bụ ngalaba dị mkpa nke ụlọ ọrụ | Gam akporosis
Sony bụ onye a ma ama maka ịbụ otu n'ime ndị nrụpụta ama ama kachasị ogologo na ụlọ ọrụ ahụ, yana nsonaazụ Xperia ya, nke ahịa emebeghị nke ọma ogologo oge. N'ihi nke ahụ, Enwere oku site na ndị na-etinye ego maka Sony iji mechie azụmahịa ekwentị yadị ka ọ na-adịghị uru.
N'oge na-adịbeghị anya, nkewa ekwentị (Xperia) jikọtara ya na igwefoto, TV na ụlọ ọrụ ọdịyo n'ime otu nkewa akpọrọ 'Electronics Products and Solutions'. Mana, onyeisi ụlọ ọrụ Sony bụ Kenichiro Yoshida na-ekwu nke ahụ ụlọ ọrụ ekwentị ụlọ ọrụ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa niile, ya mere anyị nwere ike ịkọ nkọ banyere ya.
N’ikwu okwu na nnọkọ ogbako a taa, Maazị Yoshida kwuru na ụlọ ọrụ ngwanrọ ngwanrọ elektrọniks Sony bụ nke e wuru ka elekwasị anya na egwuregwu, ọ bụghị ngwa ụlọ dịka ngwa nju oyi na igwe nchacha. Tụkwasị na ha na-abịa "Smartphones ka ntụrụndụ ngwaike", na-eme ka ọ bụrụ akụkụ dị mkpa nke azụmahịa ngwaike gị.
Onye isi ndị isi kwuru na ndị na-eto eto anaghịzi elele televishọn na "ihe mbụ ha kpọtụrụ bụ ama". Ya mere, ọ dị ka ọ ga-aga n'ihu na-elekwasị anya na nke a, n'agbanyeghị na ọ nwere ike belata ọrụ ya ebe ahụ.
Sony na-arụ ọrụ iji mee ka azụmahịa ahụ baa uru n'otu afọ ma na-eme ihe iji mee ya. Ọ chọrọ ịbawanye njirimara egwuregwu nke ekwentị ya iji dọta akụkọ sitere n'aka ndị nwe PlayStation Reuters. Ọ na-ebelata elekwasị anya na ahịa dịka India, North America na South America ma ga-elekwasị anya na Europe, Hong Kong na obodo ya, Japan. Anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya ma usoro ndị a enwe mmetụta dị mma na ego ụlọ ọrụ ahụ na-enweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony CEO kwuru na ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke azụmahịa ahụ
Njikọ nke Akụkọ Ifo ga-enwe ụdị nke ya maka smartphones